Vaovao - Ny hery lehibe sy ny faharanitan-tsaina no lakilen'ny fanapahana ny antontam-bato
Ny fahefana avo sy ny faharanitan-tsaina no lakilen'ny fanapahana ny antontam-bato
Ankehitriny, fiara mpitondra angovo vaovao no lasa safidin'ny mpanjifa maro kokoa. Na izany aza, tsara ny manamarika fa toy ny ivon-toerana manohana lehibe indrindra ho an'ny fiara vaovao, angovo miavosa dia miatrika fotoana famerana lava, tsy fahampian'ny serivisy fampitaovana ampy, ary faharanitan-tsaina ambany. Azo lazaina fa ny famoahana tambabe no antony lehibe indrindra mametra ny fivelarana fiara vaventy vaovao.
Noho izany, ny fomba famahana ny olan'ny famahana dia nanjary laharam-pahamehana ho an'ny indostria iray manontolo. Ny sasany anaty dia mino fa ny haitao avo lenta dia fanalahidy handravana ny antontan-taratasim-bola amin'ny ho avy. Amin'io lafiny io, manana orinasa mialoha ireo orinasa vahiny. Swiss ABB dia nandefa ny terra High Power DC, izay afaka mivoaka 350 KW, efa ho avo telo heny noho ny antontan-taratasin'ny Tesla super charge. Ho fanampin'izany, ny tobin'ny fiampangana haingam-pandeha voalohany an'ny European Fast Charge Alliance Ionity dia navadika ihany koa. Ny antontam-pandrefesana dia napetraky ny rafitra fampiatoana mitambatra, ary ny herin'ny famandrihana dia mahatratra 350 KW, izay afaka mamonjy amin'ny fomba mahomby ny fotoana famandrihana.
ABBTerra High Power DC Fast Charge Pile
Any Shina, haavo firy amin'ny teknolojia famahanana herinaratra mahery no novolavolaina? Inona avy ireo vahaolana mamaly vola? Mandehana amin'ity fampirantiana ity dia ho fantatrao! Amin'ny 15-17 jona, ny fampirantiana ireo fitaovana teknika iraisampirenena iraisana iraika (Pile) faha-11 ao amin'ny Shenzhen Convention and Exhibition Center. Youyou Green Energy, Yingke Rui, Yingfeiyuan, Koshida, Polar Charger, orinasa Orange Manakaiky ny 200, toy ny Electric New Energy sy Shenzhen Jiangji, dia hampiranty vahaolana isan-karazany amin'ny fiantsonan'ny fiara fitateram-bahoaka sy ny teknolojia ary ny vokatra ho an'ny famahanana herinaratra mahery vaika.
Anisan'ireo orinasa marobe mandray anjara amin'ilay fampirantiana, inona ny vokatra vaovao hoentin'ny Shenzhen Youyou Green Energy Electric Co., Ltd. (antsoina hoe "Youyou Green Energy")? Fantatra fa Youyou Green dia hampiseho andian-dahatsoratra misy andian-tsarimihetsika mitaky herinaratra tsy miovaova isan-karazany, andiana modely famerenam-pahefana tsy miovaova ary seha-pamokarana 30KW nohatsaraina E.
Youyou Green dia mety ho marika mitarika amin'ny indostria modely mamaly. Tamin'ny volana Jona 2017, Youyou Green no voalohany namorona modely fihenam-bidy 30KW ambony hery. Taorian'ny herintaona nisian'ny fanavaozana ara-teknolojia, Youyou Green dia nandefa ny andiam-pahefana maivana farany tsy miovaova. Anisan'ireny, ny krizy mahery vaika 30KW izay tsy miovaova dia tsy maintsy misongadina kokoa. Ny UR100030-SW dia mahatratra 200-1000V isan-tsokajy famokarana ary afaka mamoaka 1000V / 30A amin'ny herinaratra avo ary 300V / 100A amin'ny malefaka ambany, mahatratra 30KW ny famoahana herinaratra mandritra ny elanelam-bolan'ny sakany. Ny antontam-boninkazo napetraky ny maodilo dia afaka mamoaka onjam-pandrefesana lehibe kokoa noho io toe-jiro io ihany, mampihena ny fotoana famerana, manatsara ny fahombiazan'ny asa ary mampihena ny vidin'ny fandidiana.
Amin'izao fotoana izao, Youyou Green dia manana andian-tsarimihetsika feno indrindra amin'ny sehatry ny famahana ny modely herin'ny antontam-bato, ao anatin'izany: 30KW andian-dahatsoratra, andian-dahatsoratra 20KW, andiany 15KW, andiana herinaratra tsy miovaova nasionaly ary andiana herinaratra maharitra tsy miovaova. Miaraka amin'ny fikarohana ara-teknika matanjaka sy ny tanjaka fampandrosoana, kalitaon'ny vokatra tsara, fomba fitantanana tsy miovaova ary fikarohana tsy miankina sy fampandrosoana tombony fanavaozana, ny orinasa dia eken'ny mpanjifa. Ny fahamendrehana avo lenta amin'ny vokatra module Youyou Green Energy dia malaza, izay tsy azo sarahina amin'ny toe-tsaina tsy manam-paharoa sy ny fikatsahana faratampony.
Ankoatry ny famoahana herinaratra mahery vaika, ny faharanitan-tsaina ihany koa no lakilen'ny famakiana ny antontan-tariby. Amin'izao fotoana izao, tanàn-dehibe maro no manangana fantsom-pandefasana entana marani-tsaina. Ireo fantsom-panafarana ireo dia mampifandray ny fiasa, ny fifehezana, ny fifandraisana amin'ny rahona ary ny asan'ny faktiora. Aorian'ny fidiran'ny mpampiasa amin'ny rafitra fiampangana dia azo averina amin'ny alàlan'ny famindrana na fanovana ny kaody hahazoana fahefana izy io. Rehefa vita ny famerana dia tapaka ho azy ny herinaratra hisorohana ny afo ateraky ny fandoavana be loatra. Aloavy amin'ny alàlan'ny kaody scan WeChat na Alipay, tsy ilaina ny mifanakalo vola madinika mihitsy.
Ny manam-pahaizana momba ny indostria sasany dia mino fa ny fampandrosoana an-trano ankehitriny ny famoahana pilotra dia miorina tsara, famahanana herinaratra mahery vaika, famahanana tsy misy tariby dia ho lasa lalam-pampivoarana lehibe indrindra amin'ny indostria.